Ayamonte, नदीको फेदमा यात्रा समाचार
आज हामी ध्यान केन्द्रित गर्न फर्केका छौं España, एक अविश्वसनीय टुरिस्ट गन्तव्यहरूको संख्या भएको एक देश। मध्यकालीन महल वा क्याथेड्रलहरू हेर्दै हुनुहुन्छ? छ कला संग्रहालयहरु खोज्दै हुनुहुन्छ? छ के तपाई हेरिरहनु भएको छ ग्रामीण getaways आकर्षण संग? छ उदाहरण को लागी, आयमोंटे.
आयमोंटे यो गुआडियाना नदीको फेदमा अन्डालुसियामा छ, Huelva प्रान्तमा, Tierra Llana de Huelva को रूप मा परिचित क्षेत्र मा। सब भन्दा उच्च बिन्दु एक कोमल पहाडी हो जहाँ स्थानीय महल निर्माण गरिएको छ जसको यसको भग्नावशेष अहिलेसम्म बाँकी छैन। हामीलाई थाहा दिनुहोस् अय्यामन्टेले हामीलाई के प्रदान गर्दछ।
2 आयमोंटे पर्यटन
अयामोन्ते नदीको मुखमा छन् र नदीको दाहिने किनारमा बग्दछ। त्यहाँ चारवटा शहरी केन्द्रहरू छन्, ला शहर जुन शहरको मुटु हो, छिमेकमा विभाजित छ, पुन्टा डेल मोरल, यहाँबाट पाँच किलोमिटर, अधिक नाविक र धेरै पर्यटक, राम्रो तरिकाले, १० किलोमिटर टाढा, इस्ला क्रिस्टिना र अन्तमा, इस्ला Canela वा Barriada de Canela.
मोहमाई सुन्दर छ, प्राय: समतल, यद्यपि पाइन र मसलाको रूख छन् र ठूलो विविधता को दलदल। यी दलदलहरू आर्द्र वातावरणीय प्रणाली भएका जलीय बोटबिरुवाहरू हुन् जसको पानी प्रायः समुद्र र नदीको पानीको मिश्रण हुन्छ जसले फलस्वरूप "जलप्रलय" बनाउँदछ जुन भित्री भूमिलाई मिल्छ र शहरी केन्द्रहरूलाई घेर्छ।
यो Ayamonte को उपस्थिति को सम्मान मा। ईतिहासको हिसाबले यो क्षेत्र पनि धेरै चाखलाग्दो छ ग्रीक र रोमीहरू यता हुँदै गए। यो विश्वास छ कि उत्तरार्द्धले यहाँ एक वाणिज्यिक बन्दरगाह निर्माण गर्न सक्थ्यो, किनकि सिरेमिक र निर्माण चिन्हहरू भेटिए। थप रूपमा, यो थाहा छ कि पुन्टा डेल मोरालमा त्यहाँ रोमन बस्ती थियो, त्यसैले सम्भवतः यस नजिकको बन्दरगाहबाट तिनीहरूले संसाधनहरू वितरण गरे।
इस्ला Canela मा उही। वास्तवमा, २०१ 2016 मा, अर्को नेक्रोपोलिस इस्ला Canela मा देखा पर्‍यो, त्यहाँ पहिले नै एक छ, जहाँ नुनिलो कारखानाको अवशेष फेला परेको थियो। पछि मुस्लिमहरू arrive औं शताब्दीमा फर्कनेछन्, र रिकन्क्वेस्ट पछि यो पोर्चुगिजबाट स्पेनीको हातमा पर्यो जबसम्म यो कास्टाइलको हातमा थिएन। त्यो याद गर्नुहोस् नदी तर्फ पोर्तुगल हो त्यसैले यो बुझिन्छ, भौगोलिक स्थितिबाट पोर्तगाली मुकुटको यो सहभागिता।
किनकि हामी पोर्चुगलको बारेमा कुरा गरिरहेछौं हामी यो भ्रमण गर्न सक्ने एउटा हो पोर्तुगाली साइडमा फेरीमा डुबाएर विला रियल डे सान्तो डोमिंगो भ्रमण गर्नुहोस्। राउन्ड ट्रिपको लागत दुई यूरो भन्दा कम छ। डुry्गा एक सुन्दर अनुभव हो किनभने यो यातायातको एक साधन हो जुन क्रसमा लामो समयको लागि कार द्वारा गर्न सकिने भए पनि कार्यान्वयनमा रहन्छ।
यो क्रसिंगमा १० मिनेट वा कम लिन्छ र दृश्यहरू के ले यसलाई सार्थक बनाउँदछन्। डुry्गाका लागि टिकटहरू यो दुई स्थानमा मिल्छ जुन दुई ठाउँमा मिल्दछ। घण्टा र दरहरूको साथ टिकट अफिस छ जुन बर्षको मौसममा निर्भर हुन सक्छ। यदि तपाईं फेरीमा निर्णय गर्नुहुन्छ भने, दिमागमा राख्नुहोस् कि पोर्तुगालमा एक घण्टा कम छ, त्यसैले यससँग सावधान रहनुहोस्!
अय्यामन्टेका स्मारकहरू, विभिन्न धार्मिक भवनहरू, वर्ग र हिंड्ने सुविधा छ। उदाहरण को लागी, त्यहाँ छ स्यान फ्रांसिस्को डे Ayamonte को मन्दिर, १1417१XNUMX को पुरानो फ्रान्सिस्कन कन्भेन्ट जुन स्थानीय मार्क्विसले ल्याएको होली क्राउडको अवशेष राख्दछ। यसको १ wooden औं शताब्दीको अन्तदेखि नै विभिन्न रंगका मुडेजर लान्सरियाको सुन्दर काठको छत र मुख्य वेदीमा एउटा वेदीपिस छ।
La हाम्रो महिलाको दु: खको चर्च यो केन्द्रमा छ र शहरको संरक्षक कुमारी छ, यो काम १ XNUMX औं शताब्दीको हो। चर्चमा धेरै परिमार्जनहरू छन् तर तपाईं अधिकांशतः नियोक्लासिकल फेक्ड देख्नुहुनेछ। अर्को चर्च हो Ayamonte को उद्धारकर्ता हाम्रो प्रभुको चर्च१ 1400०० देखि मुडेजर निर्माणका लागि धेरै ठूलो
El क्रिस अफ क्रस अफ सिमन्स का आइभेन्टे यो १ 1639 XNUMX in मा स्थापित भएको थियो, यो नविकरण गरियो र भूकम्प पछि पुनर्निर्माण गरियो। यो सान्ता क्लारा, मार्टे र Lerdo de Tejada सडक बीच छ। यसमा एउटा चर्च, क्लिस्टर, घण्टा टावर र केटीहरूको स्कूल छ। योसँग सुन्दर आन्तरिक आंगन पनि छ र तपाई यसलाई अनुमति र यो परिसरको केही अंश मात्र भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ, तर आइतवारमा तपाई सामूहिक रूपमा उपस्थित हुन सक्नुहुनेछ।
La स्यान एन्टोनियो डे एयामन्टेको चैपल / हर्मिटेज यो माछा मार्ने बेसिन नजिकै अवस्थित छ र १th औं शताब्दीको अन्त देखि मितिहरू। यो नाविक समूहद्वारा स्थापना भएको हो र सबै चीज पादुआको सेन्ट एन्थोनीको जीवनसँग सम्बन्धित छ। अन्तमा, त्यहाँ छ Jovellanos भवन, पवित्र ट्रिनिटीको बेरेफुट रिलिजियस अफ अवर लेडी अफ मर्सी र बन्धकहरूको छुटकाराको पुरानो कन्भेन्टको अंश।
यो एक वर्ग केन्द्रीय आंगनको साथ भवन हो जुन चार-तल्ला ग्यालरीले घेरिएको हुन्छ। भुईं फ्लोरमा डोरिक मार्बल स्तम्भहरू छन् जबकि माथिल्लो तलामा साना विन्डोजहरू छन्। इनारको बीचमा एउटा इनार छ जुन सबैलाई पानी पुर्‍याउँथ्यो। आज यो एक बहुउद्देश्यीय भवन, प्रदर्शनी, कार्यशाला, पाठ्यक्रम, आदि हो। र यदि तपाइँ एक सामान्य बुर्जुवा घर जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँ जान सक्नुहुन्छ कासा ग्रैंडे, १1745 बाट, केन्द्रीय आँगनको साथ, चार आर्चर्ड ग्यालरीहरू र तीन फ्लोरहरू। यो भ्रमणको लागि खुला छ।
La दालचिनी टावर यो सैन्य मूल हो र यो समुद्री तट रक्षाको लागि प्रयोग भएको थियो किनकि त्यहाँ कुनै समय समुद्री डाकुहरूको आक्रमण ठूलो डर थियो। यो धेरै राम्ररी संरक्षित, शंकु आकारको छ र दुई मिटर उचाइ टीलामा यो कुल १ 17 ० मिटरमा पुग्छ।
El दुखी स्मारक को हाम्रो महिला यो प्लाजा डे España मा, स्थानीय पर्यटक कार्यालयको नजिक, Ayamonte को बीचमा छ। अर्को स्मारक संगीत को स्मारक हो, Ayamonte को Pasodoble, मरीना र प्लाजा डे ला कोरोनासिनको अगाडि अवस्थित, स्थानीय संरक्षक संत उत्सवहरूमा सामान्यतया बजाउने सांगीतिक ब्यान्डहरूलाई श्रद्धांजलि अर्पण गर्दै।
अर्को चाखलाग्दो भ्रमण पनि हुन सक्छ इक्युमुसुम मोलिनो डेल पिन्टाडो। यो प्राकृतिक पार्क Marismas de Ayamonte र इस्ला क्रिस्टिना, मा अजीब दलदलमा छ, र यो एक ठूलो नुन पानी मिल छ कि हालसालै पुनर्स्थापित गरिएको छ। त्यहाँ पुग्न धेरै सजिलो छ बाइक, कार, मोटरसाइकल वा पैदल हिडेर यदि तपाईं हिंड्न चाहानुहुन्छ किनभने यो मार्ग एक प्राकृतिक मार्ग हो।
तर यो मिल के गर्दै थियो? यो जमिन गहुँ, यो एक हाइड्रोलिक मिल थियो कि ज्वार, कम ज्वार वा उच्च ज्वार को बल को फाइदा लिनुभयो। संग्रहालय अडियोभिजुअल कोठा, एक प्राकृतिक सेटिंग कोठा, मिल कोठा र RENPA क्षेत्र को साथ पाँच क्षेत्रहरु मा विभाजित गरिएको छ, जुन एक ठाउँ हो जहाँ तपाईं छविहरू, संगीत र एक carousel जस्तै आवाजले घेरिएको छ।
तपाईं यहाँ भ्रमण गरेर पनि यहाँ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ सलिना डेल ड्यूक ट्रेल, मोलिनो मोनरेल डेल पोजो डेल केमिनो र लगुना डेल प्राडो, र अवश्य पनि, संग्रहालयमा सामान्यतया फरक गतिविधिहरू व्यवस्थित हुन्छन्।
अन्तमा, Ayamonte अभ्यास गर्न को लागी संभावना प्रदान गर्दछ पानी खेल, गोल्फ, घोडा सवारी र अन्य बाहिरी गतिविधिहरू। र यी सबै गतिविधिहरू तपाइँको भोक मिल्छ, तपाईं पछि तपसका लागि बाहिर जान सक्नुहुन्छ किनभने स्थानीय गैस्ट्रोनोमी यो Ayamonte को एक मजबूत अंक हो। प्याजको साथ टुना प्रयोग गर्न नबिर्सिनुहोस्, उदाहरणका लागि कड ला ला ब्रा, पेप्रिकामा किरण वा चामल ला मरीनेरा।
तिमीलाई मासु मन पर्छ? ठिक छ, भनिन्छ कि यहाँ केहि छन् प्रायद्वीप मा सबै भन्दा राम्रो मासु, ग्रिलमा वा ग्रिलमा पकाइएको। यहाँ केहि रेस्टुरेन्टहरू सिफारिश छन् जुन स्थानीय पर्यटन वेबसाइटले सिफारिस गरेका छन्: La Puerta Ancha, प्लाजा डे ला लागुना, मेसन प्लुमास, ग्रील्ड मासु र ले बोचेको साथ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, अय्यामन्टेले धेरै चीजहरू एक साथ ल्याउँदछ जुन यात्रीले मन पराउँदछ। एक यात्रा को लागी जब?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » गेटवे » Ayamonte, नदीको फेदमा
फर्नान्डो सोलेसियो लिल्लो भन्यो
कृपया पाठ जाँच गर्नुहोस्, नाममा केहि त्रुटिहरू छन्
फर्नान्डो सोलेसियो lillo लाई जवाफ दिनुहोस्